Fundisa izakhamizi zase-Afro ukuthi zibhekele imvelo yazo - Afrikhepri Fondation
NgoLwesihlanu, Septhemba 18, 2020
Welcome INDAWO ESIPHILA KUYO
Fundisa izakhamizi zase-Afro ukuthi zibhekele imvelo yazo
iminithi funda iminithi eli-5
Izakhamizi ze-Eco ziqoqa imfucuza
En 1980, uRené Dumont wabhala "ukuvikela imvelo kuzodinga umkhankaso omkhulu wemfundo jikelele, njengokuhlanzeka noma ukungondleki". Ngabe lokhu kukhalela okuvela kumuntu ongazivumeli ukuba atshelwe, kuye kwalandelwa uchwepheshe wase-Afrika, isazi semvelo kwasekuqaleni?
Izinhlangano zenhlangano zonke ezibambe iqhaza ekulweni nezinkinga zeplanethi zivuka sekwephuzile ukuvikela imvelo yase-Afrika futhi isikhathi eside, kwizinkonzo ezibhekele izinhlelo zokubambisana, eyodwa ibonisana ngaphezu kwakho konke mayelana nokutshalwa kwemali esindayo ne-GNP. Imfundo yezakhamizi zomhlaba, ezibhekele imvelo yakhe yayingeyona into eza kuqala. Namuhla, njengoba sibhekene nokuphuthuma kwesimo, ukungabaza akusekho ngokuhlelekile.
Ucwaningo lwamazwe omhlaba, imibiko ye-UN, izibalo zeBhange Lomhlaba okungenani zivumelana ngephuzu elilodwa: ukucekelwa phansi kwemvelo yase-Afrika kungokoqobo okuyimiphumela yayo eyakuba yinhlekelele kuleli zwekazi uma izinyathelo zingathathwanga ngasikhathi sinye. Okusho nje ukuthi sibona ukwehla kwehlathi lasezindaweni ezishisayo (amahektha angaphezu kuka-100 000 ngonyaka eZambia), ukusungulwa kwogwadule (amakhilomitha angama-300 ngeminyaka engamashumi amathathu emazweni aseSahel) amazinga ukukhula. Kukholwa ukuthi ama-Afrika ayinandaba kangako nemvelo ahlala kuyo. Lokhu, okungenani, kuyicala laseNtshonalanga.
Ngakolunye uhlangothi, ama-Afrika acela ukubaluleka kwesiko ukuzithethelela izindlela ezithile zokulima ezibuye zinikeze ubufakazi bazo: ukulima ngokushiswa nokushiswa, into yazo zonke izinsolo, kube nomthelela amakhulu eminyaka ekuvikeleni imvelo kodwa ayizange imelane nokuhlinzwa kwabantu. Inkinga akukhona ukuthi, ukungabi bikho kwengqondo e-Afrika: izwekazi kungenye yezinkinga zabantu futhi umuntu uhole imihlambi yakhe lapho iminyaka engaphezu kwezinkulungwane eziyisishiyagalombili. Uma isenzo sawo besilimaza, bekuzoba ngokuhlobene nenkathi yegolide engekude.
"Sikhohliwe ukuthi abantu base-Afrika bayayazi indlela yokwenza imvelo," kuvuma isazi saseYurophu kwinkomfa yaseRio. Ingane yakwa-Abidjan ifunda kusenesikhathi ukuthi ingachithi izinsiza eziseduze nayo: ukuphinda kusetshenziswe kabusha imfucuza iYurophu eyathola eminyakeni embalwa edlule kwakuyinto endala kakhulu emadolobheni ase-Afrika lapho amapulasitiki, ingilazi, amathini ayatholakala, ayathengiswa kabusha noma ayenziwa. Ukulahlwa kukadoti kuyinjongo yokufunda ezikoleni ezisenyakatho, hhayi e-Afrika lapho, ngokwesidingo, lokhu kuthinta kuyingxenye yempilo yansuku zonke.
Okuqhamuka lapha esenzweni sokucabanga kuvela ekusindeni lapho.
Kepha-ke iyiphi indima yemfundo? ngaphandle kokungabaza, ukuphuthuma okunesihluku kokuvikelwa kwemvelo kuzoxazululwa kuphela ngokuvela kwesakhamuzi sase-Afrika esazi ngezinkinga futhi esikulungele ukwenza okuthile. Ngubani ongamqeqesha kangcono kunesikole? ikusasa lalelizwekazi lisengcupheni: ama-90% emiholo yalo yokuthumela ngaphandle kanye ne-50% yemisebenzi ivela ekuxhashazweni kwezinsiza zezemvelo. Kuzokwenzekani eminyakeni engamashumi amabili uma izinqumo zingathathwanga? ochwepheshe abasha, onjiniyela, abaphathi kumele baqeqeshiwe abazokwazi ukuhlanganisa ukuguquguquka kwemvelo ezinhlelweni zabo. Akukona ukwanelisa abanikeli bayo ukuthi i-Senghor University for the Development of Africa, izakhiwo zayo ezise-Alexandria, yavula izigaba ezimbili ezintsha zemvelo eminyakeni emibili eyedlule, kanye nolondolozo lwamagugu kamuva nje. okwemvelo
Ezingeni lakhe, isakhamuzi sase-Afrika esivamile asikwenqabeli ukuvikeleka kwemvelo, kepha okwenzeka nsuku zonke kuyamvimbela ukuthi athathe isinyathelo emuva lokho eNtshonalanga esikubona kufanelekile. Izingane eziseDakar noma e-Abidjan zivame ukukhathazeka kakhulu ngezinkinga zokusinda kunokuphela komhlaba. Okubalulekile kubo ukuthola namuhla futhi ungqimba lwe-ozone oluhlanjulwayo, lungabi yilutho ngokwedlulela kokuluhlaza, alusho lutho kubo. Ngokuphambene nalokho, izingane zaseNyakatho, iningi labo lempilo yansuku zonke zibangela ubunzima, ziqonda kalula imiphumela emibi ngokunyamalala kwamahlathi noma amagesi akhishwa emoyeni. Ngakho-ke imfundo yezwe lase-Afrika izoqikelela ukuthi ingasekeli izinhlelo zayo kulezo zaseNyakatho ezingasuswanga ekuqinisekisweni okufanayo. Izinhlelo zisazofanele zibe khona: noma kunjalo, ukufunda izincwadi kunoma yisiphi isiyalo kuvame ukukhanyisa mayelana nezikhala ezikule ndaba.
Kodwa-ke, imvelo ithakazela okungaphezu koyedwa wase-Afrika, futhi ngokumangazayo iyisithiyo ekuthuthukisweni kokuvikelwa kwakhe. Ngoba uma izinkinga zemigwaqo, ukungabikho kwamathoyilethi ezikoleni noma ukuqoqwa kukadoti kuthinta isisekelo sabantu, abakulungele ukuthatha isinyathelo, abenzi bezinqumo abavame ukuba nelungelo lokuhlala ezindaweni ezivikelwe kakhulu abanandaba nazo neze. Ikakhulu selokhu kwakhiwa uhlelo lokuhanjiswa kwamanzi angcolile alikaze likhiphe imali eningi. Abanikeli abakhulu, njengabaxhasi bezimali bendawo, bakhetha amaphrojekthi abizayo (okusebenziseka kwawo kungahlobene nezindleko) ezinhlelweni zasekhaya, ezingabizi kakhulu futhi zisebenza ngempumelelo kakhulu.
Isikole singabe sesidlala indima yaso ekuthuthukiseni ukuphathwa kwezimo eziphuthumayo zasendaweni nokusiza ukuqeqesha abafundi besikhathi esizayo abakwazi ukubhekana nezidingo zase-Afrika. Sekuyisikhathi eside, imvelo ibonakala kubantu base-Afrika njengombono waseNtshonalanga oza ukuzophikisana nokomela kwabo intuthuko. Akulula, empeleni, ukucacisela umlimi ovunwa izilimo zakhe njalo ukuthi izindlovu kumele zivikelwe. Imfundo kuphela ezovumela ukwabiwa kabusha kwemiqondo nemibono engasafanele ibuzwe. Lo mzamo manje usetshenziswa izinhlangano zomhlaba wonke, i-Unesco ekhanda, kepha futhi noMnyango Wezokubambisana noma neNhlangano Yezemfundo. Enye yezinhlelo inesihloko esithi "ukuba yisakhamuzi, imvelo, intuthuko", amagama amathathu aqakathekileko wesenzo esizokwenziwa eminyakeni ezayo e-Afrika.
Izindlela zokuvikela imvelo yilezi:
Ukugcina indawo inempilo
Ukulwa nokuguguleka nokugawulwa kwamahlathi
Ukuvikelwa kwezilwane zasendle
Khipha kusuka ku: Diagonals, No. 29, 1994, pp.23-24
I-Tao Te King noma incwadi yendlela nobuhle - uLao Tzu (Audio)
Benkos Bioho umholi isigqila itjhaphuluko sibalo izifanekiselo Afrocolombian
Ubani uMaria Chiquinquira Diaz, isigqila sokuqala e-Ecuador ukunqoba inkululeko yakhe
Ulithandile ikhasi lethu?
Sesha isigaba Khetha isigaba Ukususwa AFRIKHEPRI-TV UKUPHAKATHI NOKUBHALA IZINCWADI ZAMABHAYIBHELI ZOKUHLALA I-AFRICAN CUISINE UKUKHULUMA ABASEBENZI BAMASEBENZI UKUZIJABULISA idokhumentari IZINGANE INDAWO ESIPHILA KUYO UBUGQILA IZINTO ZEZENCULTURAL IZINDABA ZEBHIZINISI AMAFOMANA AFRIKA IMIPHUMA YOKUBHALA UMLANDO OTHIWEYO NOKUPHILA AMAZIMU AFRIKA UKUBHALISWA / Login ABANTU ABAKHULU ABAKHULU NABASEBENZI KINDLE UMBONO WE KAMA sezincwadi I-TV LIVE INCWADI YOKUTHENGA INCWADI YOKUDLULA Incwadi ye-PDF UMCULO IZINDABA, IZINDABA PARADIGM KAMIT I-KAMITE THOUGHT ABANTU BASE-AFRICAN NEMAGA I-PHILOSOPHY & PSYCHOLOGY Philosophy and Psychology Health and Medicine DLALA izinkondlo PSYCHART KOMZIMBA UMBUSO WAMA-AFRIKA IMPILO NEMPILO ISAYENSI NEZIMPILO UKUHLELA UKUPHILA NEMIBUZO Imidlalo IZITHOMBE ZAMATHEMI GROBLI URGENT / NEWS IMIQOPHI I-Web-TV